युगसम्बाद साप्ताहिक - साँच्चैको नेता बनौं न
Monday, 01.27.2020, 07:31pm (GMT+5.5) Home Contact
साँच्चैको नेता बनौं न
Wednesday, 01.04.2017, 12:01pm (GMT+5.5)
अहिले राष्ट्र जोगाउने कि सत्ता भन्ने ज्वलन्त प्रश्न आम नेपालीको मनमा उब्जिएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न भन्दै राखिएको राष्ट्रघाती संशोधन प्रस्ताव, नेपाली सेनालाई भारतको मातहत संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति अभियानमा पठाउने प्रस्ताव जस्ता विषयले नेपालमा देशभक्त नेताको खडेरी नै परेको स्पष्ट देखिएको छ । नेता छैनन् भने जत्ति पनि छन्, छन् भन्ने हो भने देशका हितमा काम गर्ने कोही भएनन् । अहिलेको चिन्ता यही हो ।
अहिले मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता चरम संकटमा परेको भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई सर्वेसर्वा बनाउनेहरूले यसतिर पटक्कै चासो दिएका छैनन् । उल्टै राष्ट्रवादी सोच राख्नेहरूको दोहोलो काढ्ने गरिएको छ । सत्ता लिप्साका कारण मुलुकको अस्तित्व नै मेटाउने दीर्घकालीन रणनीतिको शिकार मुलुक भैरहेको छ । अहिले कतिपय नेताहरूलाई सिक्किमका तत्कालीन काजी लेण्डुप दोर्जेसंग तुलना गर्न थालेका छन् । दोर्जेको सत्ता स्वार्थले सिक्किमको स्वतन्त्रता भारतको पोल्टामा पुगेको दृष्टान्त त्यति पुरानो हैन । अहिले नेपाल हाँक्ने सही नेताको अभाव छ ।
अरूको उपयोगमा आउने हाम्रा नेताहरूको नैतिक दुर्वलताले गर्दा मुलुक इतिहासमै सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता अहिले जत्तिको कमजोर यसअघि कहिल्यै थिएन भनेर नेताहरूले नै भन्ने गरेका छन् । नेताहरूले यस्तो भन्ने गरे पनि उनीहरू राष्ट्रियता जोगाउने र जनतालाई जगाउने काम गर्नुको साटो यस विपरीतको कार्यमै तल्लिन छन् । शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीति अनुसार निर्णय गर्ने गर्दा मुलुकको अखण्डतामाथि नै आँच आइरहेको छ । धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको घोषणा होस् वा संघीयता यी विषय स्वदेशबाटभन्दा विदेशबाट बढी लागेको आम जानकारीको विषय हो । अझ जातीय अधिकार स्थापनाको नाममा विदेशीले पैसाको खोलो बगाए पनि अहिले मत्थर भएको छ । ‘हाम्रो यत्रो लगानी भैसक्यो अब पछाडि फर्कन सकिंदैन’ भन्ने पश्चिमा मुलुकहरू अहिले पनि जातीय नारा घन्काउन छाडेका छैनन् । तिनीहरूकै पैसा खाएकाहरू अहिले अनेक नारा घन्काइरहेका छन् । नेपाली जनताले गर्नुपर्ने निर्णय सात समुद्र पारीबाट भैरहेको छ । कुनै एक क्षेत्र छैन, मुलुकले स्वनिर्णय गर्न पाउने ।
राजनीतिक निर्णयको अधिकार त बाह्य निर्देशनको चंगुलमा परेको छ नै आर्थिक–सामाजिक अवस्था पनि त्यस्तै हुन पुगेको छ । नेपाली मौलिक परम्परा ध्वस्त हुने क्रममा छ । आर्थिक पराधिनता बढ्दो छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा मौलाउँदै गएको विदेश परस्तता अर्थतन्त्रमा व्यापक परेको छ । आर्थिक–सामाजिक पराधिनता नै कुनै पनि मुलुकलाई पराधिन गर्ने प्रमुख औजारको रूपमा स्थापित हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा नेपाल विस्तारै भारतको पराधिन बन्दै गएको दृश्यहरू जताततै छरपस्ट हुन पुगेको छ ।
मुलुकको राजनीतिमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप बढेको बढ्यै छ । यसमा पनि भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र निर्देशनले मुलुकको राजनीतिलाई वेथितिकै दलदलमा मात्र भास्दै लगेको छ । बाह्य प्रभावका रणनीतिक खेलले जताततै आशंका र आक्रोश मात्र उत्पन्न गरेको छ । मुलुकको समग्र क्षेत्रको जिम्मा लिएको भन्ने प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा राष्ट्रियताप्रति पटक्कै सचेतता नहुँदा मुलुकको शिर निहुरेको निउरेकै छ ।
राष्ट्रियता विदेशीको पाउमा सुम्पने कार्य गरेर पछि पछुताउनुको कुनै अर्थ हुँदैन । समय छँदै आत्मचेत जगाएर राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सके मात्र काम लाग्दछ । आत्मालोचना त लेण्डुप दोर्जेले पनि गरेका थिए तर मुलुक विदेशीलाई सुम्पिसकेपछि गरिएको आत्मालोचनाको के अर्थ ? नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई सुधारेर राष्ट्रिय जागरणको अभियान थाल्नु नितान्त आवश्यक भैसकेको छ । विदेशीले भनेको जे पनि मान्ने गलत संस्कारको अन्त्य अहिलेको एक मात्र आवश्यकता हो । राष्ट्रियता बलियो बन्यो भने कसैले पनि हेप्न सक्दैन ।
नेपालको विकास नहुनुमा पनि यही नै कारण प्रमुख छ । मुलुकलाई स्वाभिमानपूर्वक आर्थिक–सामाजिक विकासको दिशामा अघि बढाउने हो भने पराश्रयी चिन्तन त्याग्नैपर्छ । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि नेताहरूको पटक्कै ध्यान गएको छैन । कसरी सत्ता र शक्ति आर्जन गर्ने र कसरी आफ्नो वर्चश्व कायम गर्ने भन्नेतिर मात्रै उनीहरूको दौड रहेको छ । शक्ति आर्जनको भोकले ग्रस्त नेताहरूले राष्ट्रिय मर्यादाको समय ख्याल नगरी विदेशी सामु लम्पसार पर्दा मुलुकको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति गरेको मुलुकका जनतालाई त्यसपछि भएको दुईवटा अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तनले पनि राहत दिन सकेको छैन । नेताहरूले निरन्तर झूटो सपना बाँडेर भ्रमको खेती गर्दैआएका छन् । जनतालाई कसरी, कुन उपायबाट भुलाउन सकिन्छ त्यस्तै रणनीति मात्र चलिरहेको छ । जनताको जीवनस्तर उकास्न नसके पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान उच्च राखेका भए एउटा सन्तोषको अवस्था हुन्थ्यो तर त्यो पनि अहिले छैन । अहिलेको सर्वा्धिक खड्केको विषय भनेको राष्ट्रिय चिन्तनशीलता नै हो । मुलुकको मुहार फेरिने गरी वर्तमानको चुनौतिपूर्ण समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नसक्ने राष्ट्रिय चेतनाले ओतप्रोत भएको राजनीतिक नेतृत्व अहिलेको खाँचो हो र त्यस्तो व्यक्तित्वको उदय नहुँदासम्म राष्ट्रियताको जगेर्ना र जनताको समृद्धिको ढोका खुल्न नै सम्भव छैन । यसले गर्दा समृद्ध नेपालको निर्माणको सपना बाड्नेहरू झण्डै सात दशकको अन्तरालमा धेरै भए तर गरीब नेपालीको मुहार कहिल्यै फेरिएन ।
राजनीतिलाई राष्ट्रनिर्माणको माध्यम बनाउनुको सट्टा भ्रमको खेती गरेर क्षणिक स्वार्थ पूरा गर्ने औजारका रूपमा मात्र प्रयोग गरियो । राजनीतिले सामाजिक विकृति, आर्थिक अपराध र बाह्य स्वार्थका प्रक्षेपित खेलहरूबाट मुलुकलाई जोगाउन प्रभावकारी शैलीमा रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा उल्टै राजनीतिकर्मीहरू नै सामाजिक विकृतिका मुहान, आर्थिक अपराधका संरक्षक र बाह्य हस्तक्षेपका संवाहक बनेर देखापर्न थाले । राष्ट्रहित विपरीतका राजनीतिक–अराजनीतिक कर्महरूको शृङ्खलाबद्ध विस्तारले गर्दा आम जनतामा बढ्दै गएको वितृष्णा र आक्रोश कतिबेला विस्फोट हुने हो र त्यसले कस्तो नतिजा ल्याउने हो ? यसै भन्न सकिन्न । यस दिशातर्फ जिम्मेवार नेताहरू सचेत हुनु आवश्यक छ । आफूलाई नेता भनाउने मात्रै हैन नेता नै बनेर केही गर्ने ध्येय राख्नुपर्दछ ।